Isku-darka Qaboojiyaha Ameerikaanka ah, Talaajada Laab Garaash - Nenwell
Foosto meeldhexaadka ah
abuuraan qiimo aad u badan oo ka badan alaabada
Nenwell waxay leeyihiin noocyo buuxa oo heer sare ah iyo tamar savinng qaboojiye alaab ah si ay ugu dhigmaan wax kastoo dalab gaar ah ah
In ka badan 20 sano oo khibrad u leh qaboojiyaha ayaa la xareeyay. Nenwell waxay siisaa dhammaan macaamiisha xalal hufan oo sax ah qaboojiyaha iyo hoteelka. Waxaan had iyo jeer fulinaa ballanqaadkeenna ah "In la abuuro wax ka qiimo badan rabitaanka macmiilka".
Inaad ka horeyso Suuqa
leh kala duwan
Aragtida caalamiga ah ee ballaadhan iyo dareenka xasaasiga ah ee suuqa, Nenwell wuxuu soo saaray alaabooyin cusub ama la habeeyay oo ay la leeyihiin macaamiisha. Inaad ka horreyso suuqa, inaad ku guuleysato saamiga suuqa oo badan oo aad macaash ka hesho macaamiisha si wadajir ah.
Aragtida Caalamiga ah, Taabo Waxyi
Ka qayb qaadashada noocyada kala duwan ee qalabka hudheellada caalamiga ah iyo bandhigyada qaboojiyaha sannad kasta. Tani waxay naga dhigeysaa inaan noqono kuwa xirfad iyo xasaasi u ah isbeddelada suuqa.
iibsiga caalamiga ah,
iibka kulul ee adduunka!
Awoodaha wax soo iibsiga ee caalamiga ah waxay u oggolaaneysaa Nenwell inuu kula taliyo oo muujiyo badeecadaha adduunka lagu iibiyo ee kulul ee loogu talagalay macaamiisha waqtiga la siiyay Macaamiisha tirada badan ee macluumaadka wax soo saarka ee markii ugu horreysay. Ka caawinta macaamiisha inay qaataan fursadaha ganacsi ee ugu horeeya.
iskaashi markhaati fursado aan la koobi karayn!
matoor faneedka axial
matoor marawaxado hadh leh
Fiilooyinka tubbada siligga
biiro nalka albaabka
ku xir tuubada
cagta la hagaajin karo
Wax-soo-saarka suuq-geynta wax-ku-oolnimada iyo kartida goobidda - 500 alaab-qeybiyeyaal Iskaashi la leh in ka badan 10,000 oo ah alaabada iyo qalabka qaboojiyaha. Oo ay ku jiraan qalabka guryaha, qaybo iyo alaabta ceeriin.
Xalka qaboojiyaha oo dhameystiran
hudheelka & dukaamada waaweyn!
Sannado tababar xirfadeed ah, tiro badan oo ikhtiyaarro wax soo saar ah iyo falanqeyn warshadeed oo sax ah ayaa Nenwell si dhakhso leh u xulata si loogula taliyo waxyaabaha ugu habboon ee qaboojiyaha u badbaadiya tamarta cagaaran. Si kor loogu qaado ku habboonaanta wax soo saarka, badbaadi shaqada iyo boos! U diyaari sawiro sawiro macaamiisha si ay u bixiyaan xalka ugu fiican.
Horumar mustaqbal ifaya leh
10 jeer iibinta saddex sano gudahood
Sanadihii la soo dhaafay, Nenwell waxay si isdaba joog ah u soo bandhigeen talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan horumarinta suuqyada macaamiisha kala duwan, macaamiisha ku beeray khibrada alaabada qaboojiyaha, iyagoo ka caawinaya macaamiisha inay si deg deg ah u qabsadaan qaybta suuqa! Qaar ka mid ah macaamiisheenna ayaa si dhakhso leh ugu gaadhay kobaca iibka muddo gaaban iyada oo loo marayo iskaashiga Nenwell!
Waxaan ku faaneynaa tan sidoo kale waxaan u qaadaneynaa inaan dib ugu celino daryeelka bulshada ee Nenwell Guusha ganacsigeenu wuxuu ku saleysan yahay daacadnimada, kalsoonida, is aaminaada iyo ixtiraamka u dhexeeya dhammaan xubnaha shirkadda, macaamiisheena iyo ganacsigaba. Anaga oo garwaaqsanay muhiimada iskaashigu, waxaan dhiseynaa xiriiro adag oo aan la leenahay macaamiisheenna iyo alaab-qeybiyeyaasha, waxaan diiradda saareynaa koritaanka iyo guusha labada dhinac.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010 - 2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.